Chinja saizi yemapikicha ako, uvashandurire kune mamwe mafomati uye zvimwe ne ImageSize | Ndinobva mac
Chinja saizi yemapikicha ako, uvashandurire kune mamwe mafomati uye zvimwe uine ImageSize
Zvekare, ini ndinomanikidzwa kutaura nezve mabhenefiti eiyo Ongororo application kana uchitaura nezvechishandiso chinotipa zvakafanana mabasa kune ino. Panguva ye gadzirisa mapikicha mumabatchKunyangwe kuchinjisa kana kushandura iwo mamwe mafomati, isu tine akasiyana mafomu ekushandisa atinogona mune Mac App Store.
Kunyange chiri chokwadi kuti neKutarisa, isu tinogona zvakare kuita batch maitiro, mashandiro ekuzviita haasi ese enjere iyo yatinoda, saka parudzi urwu rwebasa, zvinokurudzirwa kushandisa chishandiso senge ImageSize. ImageSize inotibvumidza kuti tishandure saizi yemifananidzo mune mabatch mukuwedzera nekutibvumidza isu kuti tivashandure kune chero imwe fomati, zvakare mune mabatch.
Kuita urwu rudzi rwebasa kunotiponesa yakawanda nguva, kunyanya kana huwandu hwemifananidzo yekugadzirisa hwakanyanya kwazvo. Uye zvakare, zvinotibvumidza isu kutumidza zvakare mifananidzo pamwe chete, basa rinova titanic kana tichida kuzviita kuburikidza neKutsvaga asi zita remafaira edu rakavakirwa pazuva uye nenguva yekutora. ImageSize inoenderana nemafomati: JPG, JPEG, JPE, JP2, JPX, PNG, TIFF, TIF, GIF uye BMP uye inotibvumidza kushandura ese mafomati kuva JPG, JPEG, JPE, JP2, JPX, PNG, TIFF, TIF , GIF, BMP.
ImageSize main maficha
Resize mifananidzo mumatch.
Tinogona kuseta saizi yekushandura nemapikisheni kana nepesenti.
Inochengetedza chimiro chechimiro chemifananidzo.
Iyo inotibvumidza isu batch inoshandura mifananidzo
Uye zvakare, tinogona kutumidzazve pamwechete mifananidzo yese mune imwechete folda kana chete iya yatakatosarudza kare.
ImageSize inowanikwa kurodha nhasi ma1,09 euros chete, kupihwa kunozopera pakupera kwezuva, kuchidzokera kumutengo waro wepakutanga unova 4,49 euros. Ichi chishandiso chinoda OS X 10.10 uye chakagadzirirwa kutora mukana wakazara we64-bit processor.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac zvirongwa » Mac App Store » Chinja saizi yemapikicha ako, uvashandurire kune mamwe mafomati uye zvimwe uine ImageSize
Wedzera iyo peji shandura mhedzisiro kumifananidzo yako nePeji Turn Mhedzisiro